देशभरि कुल २३ सय ६६ जनाको कोरोना परीक्षण, नयाँ संक्रमण देखिएन : स्वास्थ्य मन्त्रालय (भिडियो)
काठमाडौं, Apr 08, 2020
नेपालमा बुधबारसम्म कुल २३ सय ६६ जनाको कोरोना भाईरसको परीक्षण गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बुधबार यसबारेमा जानकारी गराईएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले दिएको जानकारीअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा आजसम्म १९६५ को कोरोना भाइरसको परीक्षण भएको छ भने काठमाडौं बाहिरको ४०१ जनाको परीक्षण भएको छ। नयाँ संक्रमण देखिएको छैन् ।
देशभरि २३ सय ६६ जनाको कुल परीक्षण भएको छ । आजपनि करिब १८० केशका नमूना रन भैरहेको उनले जनाए । उनले भने,”उपत्यकाबाहिरबाट आउने क्रम जारी छ । उनकाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १२ जना र काठमाडौं बाहिर १२२ गरि कुल एक ३४ जना अहिले आईसोलेशनमा रहेका छन् ।”
सरकारले नेपाली सेनाको छाउनी अस्पताल र बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालहरु कोरोना संक्रमित विरामी राख्नका लागि तयार भएको बताएको छ।
सरकारले दुबै अस्पतालमा १ सयभन्दा बढी बेड र ६ वटा सघन उपचार कक्ष (आएसीयु बेड) पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको बताएको हो । मंगलबार दुबै अस्पतालमा अनुगमन गरी सम्पूर्ण तयारी पुरा भएकाले जुनसुकै बेला पनि विरामी राख्न सकिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए।
मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. देवकोटाले पछिल्लो २४ घण्टामा स्वावको नमुना संकलन गरिएका ५ सय ७० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताए। बुधबारसम्म २ हजार ३ सय ६६ वटा परीक्षण भएका छन् । उपत्यकामा १ हजार ९ सय ६५ वटा र उपत्यका बाहिर ४ सय १ जनामा परीक्षण गरिएको उनले बताए।
मंगलबारसम्म १ हजार ७ सय ९६ जनाको परीक्षण गरिएको थियो । अहिलेसम्म ९ जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएकोमा १ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । भने ८ जना उपचाररत रहेका छन् । उपचाररत रहेका परिवार तथा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरबाट मात्रै १ सय ९८ जनाको र्यापिड किट र स्वावको नमुना संकलन गरिएको छ । अछाम, जुम्ला र सुर्खेत लगायतका जिल्लाबाट ८ सय २ वटा नमुना संकलन गरिएको प्रवक्ता डा. देवकोटाले बताए। दिपायलमा बुधबार ३ सय भन्दा बढी नमुना संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ टोली परिचालन गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: Apr 08, 2020 17:36:41
घाँस झार्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक महिलाकाे मृत्यु
प्रहरीले कुट्दा सफाइकर्मीको खुट्टा भाँचियो, वीरगन्जको फोहोर उठेन
पर्सामा चट्याङ परेर एक मानिसहित २ चौपायको मृत्यु, लाखौको क्षति
स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी बन्द गर्न आग्रह
तुलसीपुरमा एक युवक मृत फेला, हत्यामा भएको आशंकामा ८ जना पक्राउ